Maalinta: Meey 26, 2019
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, Kayseri Transportation Inc. wuxuu la kulmay Iftar galabta. Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu sheegay in adeegga gaadiidka ee Kayseri ee 25 uu maalin walba bixinayay gaadiidka dadweynaha. Kayseri [More ...]
Gaadiidka guriga ka soo jeeda qashinka gudaha Kardemir
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa ku dhawaaqay in nooca gawaarida ee gudaha uu diyaar noqon doono dhamaadka sanadkaan iyo in 2022 ay qorsheyneyso in ay ku soo rogto gaariga gudaha wadada. automakers gudaha Turkey ee wax soo saarka ah [More ...]
Mashruuca Wadooyinka Wadnaha ee Waqooyiga Marmara, kaasoo horseedi doona goynta 17 kun oo geed oo ku yaal Beerta Dabeeciga ah ee Ballıkayalar ee degmada Gebze ee Kocaeli, ayaa la oggolaaday. Diidmada Rugta Injineeriyada Deegaanka ee Wasaaradda waa la diiday. Sidoo kale gobolka [More ...]
Nuri Demirağ oo wuxuu kaloo sameeyey fasaxa ugu horeeyay ee ku sugan Istanbul, Turkey: diyaaradaha Turkiga ee u gaar ah markii ugu horeysay ganacsi oo gaar loo leeyahay, waxaa soo saaray ganacsade Nuri Demirağ In 1936 ah. ganacsatada ugu Nuri Turkey ayaa muhiim ah [More ...]
26 ee Taariikhda 1934 May 2443 iyo 26 tirada lambar ee Wasaaradda Nafiya Ururka ayaa isku daraysa dhismaha jidadka tareenka iyo hawlgallada. 2005 May 86 waxay yareyn doontaa Aliağa-Menderes inta u dhaxaysa daqiiqadaha XNUMX, sanadkii [More ...]